Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina : «Afaka mitaraina ireo tsy mahazo Vatsy tsinjo» | NewsMada
Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina : «Afaka mitaraina ireo tsy mahazo Vatsy tsinjo»
Mametraka ny paikady sy ny fandaminana. Nampiantso ary namory ireo sefo fokontany miisa 192 eto Antananarivo Renivohitra ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, omaly. Nomena toromarika avokoa izy ireo tamin’izany momba ny fizarana fanampiana…
«Tsy mora ny mizara fanampiana ho an’ny olona roa hetsy izany. Tsy vita anatin’ny iray andro izany. Tsy maintsy misy ny fandaminana na iaraha-mahalala aza fa maika sy noana ny vahoaka… Afaka mametraka fitarainana ireo tokony hisitraka izany nefa tsy mahazo, afaka 10 andro eo ho eo», hoy ny ben’ny Tanàna, Andriantsito­haina Naina, tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna, Anakalely. Nanteriny fa azo atao ny mitaraina eny anivon’ny fo­kontany, boriborintany, kaominina ka horaisin’ny CUA an-tanana, aterina avy hatrany any amin’ireo tsy nahazo ny fanampiana raha mitombina izany.
Andian’olona mandrehitra afo… resaka politika
Niaiky ny ben’ny Tanàna fa maro ireo mimenomenona. Tsy mety anefa raha sefo fokontany vitsivitsy no ma­nimba ny sefo fokontany miisa 192 sy ny hasiny maha izy azy. «Antony mahatonga anay hanitsy ny fomba fiasa izany ary ankaherezana azy ireo,amin’izao tetikasa izao. Misy koa anefa ireo andian’olona mandrehitra afo. Aoka tsy afangaro amin’ny resaka politika ny fanavotana ny vahoaka sy ny tanàna», hoy ihany izy. Nanteriny fa hatsaraina rehefa misy ny tsy mety ka havaozina ny karnem-pokontany, manomboka amin’ny herinandro ka nilazany fa hosoloina haingana izany. «Maro ireo tsy manana karne noho ny tsy fandoavany ny adidy. Be­tsaka loatra ny famoahana karne tena izy tsy izy», hoy izy.
Hatsaraina ny fomba fizarana ny fanampiana
Anisan’ny antony amin’ny nampiantsoana ireo sefo fokontany izany ho fanatsarana ny fizarana manoloana ireo fitarainan’ny mponina. «Efa nanomboka ny fizarana ary hita fa misy ny toerana milamina fa eo koa ireo tsy milamina…», hoy ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina.
Tsiahivina fa handefa solontena ny CUA hanara-maso ny fandrafetana ny lisitra eny anivon’ny fokontany.